Maxaa ku qarsoon sawirka casuumaadda Muhiimka ah ee Sebtember 7? | Waxaan ka socdaa mac
Shalay waxaan daabacnay maqaal ugu horeyn subaxnimadii taas oo aan ku ogaanay in imaatinka casuumaadaha munaasabadda Muhiimka ah ee ay Apple u dabaaldegeyso bisha Sebtember ay tahay inay aad isugu dhowaato waana taas haddii ay go'aansadaan inay noqoneyso toddobaadka ee 5ta, mar horeba waqti ayey qaadanayeen si ay u diraan.
Saacado ka dib waxaan helnay warka in runtii shalay, 29-kii Ogos, ay ahayd maalintii ay Apple u dooratay inay u dirto casuumaadaha munaasabadda ugu dambayn noqon doonta Sebtember 7. Waxaan kahadleynaa markaa Apple inuusan ka fekerayn waxa Sony sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay maanka ku hayso dhacdo usbuucaas ah iyo in iPhone 7 adduunka la tusi doono 7da.
Hadda oo aan maalin helnay dheef shiid casuumaadda laftiisa, waxaan ku sameyn karnaa falanqeyn waana arki karnaa waxa sawirka fudud ee uu haysto qarsan karo. Hadaan fiirino casuumaada Waxaan arki karnaa in sanadkaan uusan lahayn wax fariin ah "code" maaddaama ay Apple innagu caadeysatay iyo in sawirka laftiisu ka kooban yahay wareegyo midabbo kala duwan leh, qaarkoodna ka mugdi badan yihiin kuwa kale.
Tani waa meesha saxda ah ee aan dooneyno inaan diirada saarno falanqeynteena waana haddii aan tagno mashiinka raadinta Google oo aan si fudud u dhigno:
Nalalka leh qoto dheer duurka
oo waxaan eegaynaa "sawirro", xitaa sawirkii ugu horreeyay ee raadinta la soo celiyo waxay la mid tahay fikradda ay Apple ku hirgelisay casuumaaddeeda. Apple waxay samaysatay dusha sare ee tufaaxa oo leh laydhadh qoto dheer oo duurka ku jira, taasi waa, laydh meelaha fog ka muuqda oo u eg dhibco iftiin faafay. Iskuday sababtoo ah wax u dhow ayaa diirada la saarayaa ...
Waxaas oo dhami waxay naga dhigayaan inaan u maleyno in runtii iPhone-ka cusubi uu la imaan doono laba kamarad isla markaana aan awood u yeelan doono inaanu yeelno sida ay ku dhacdo kamarad ficil-celin ah, haddii haddii, qaar ka mid ah nabarrada la xakameyn doono loo xakameyn doono sida aan ku sameyno ujeedooyinka jawaab celinta. Marka waxaan wejiyadayada hortooda ku haynaa casuumaad naga dhigaysa inaan aragno in badeecada udub dhexaadka u ah soo bandhigida ay noqon doonto iPhone-ka haysta kamaradaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Maxaa ku qarsoon sawirka casuumaadda muhiimka ah ee Sebtember 7?
Ma aanan ogeyn in laydhku ay yihiin dusha sare ee miraha la qaniinay
Xaqiiqdii waad saxan tahay Lizard !! Waxaan kaloo ogaaday, ma yeelan doonnaa astaan ​​cusub?
Ku jawaab taniocanya
Waxaan u maleynayaa in halkii laydhku tixraaci lahaa barnaamijyada aan diirada la saarin ee cusub ee Apple Watch 2
Jawaab Shisui Uchiha
Apple wuxuu soo saaray nashqadaha dhagaha ee Beats cusub oo ah qalab loogu talagalay Mac